Dowlada Masar Oo Taageertay Heshiiskii Uhuru Iyo Farmaajo - Awdinle Online
Dowlada Masar Oo Taageertay Heshiiskii Uhuru Iyo Farmaajo
November 19, 2019 (Awdinle Online) – Abdel fattah El-Sisi, Madaxweynaha Dalka Masar, ayaa soo dhoweeyay heshiiskii Diplomaasiyadeed ee ay dhowaan Magaalada Nairobi ku kala saxiixdeen Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhiggiisa Kenya, Uhuru Kenyatta.
Qoraal uu Madaxweyne El-Sisi, soo dhigay barta uu ku leeyahay Twetter-ka ayuu ku sheegay in uu muhiim yahay heshiiskaas, isla markaana uu Gobolka u horseedayo xasilooni, iskaashi iyo horumar.
“Waxaan muujinayaa in aan aad ugu faraxsanahay heshiiska ay Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya wada saxiixeen, kaas oo laysugu soo dhoweynayo xiriirkii iyo iskaashigii ka dhexeeyay labada Dowladood”ayuu yiri, Abdel Fattah El-Sisi.
Madaxweynaha Masar oo hadda guddoomiyaha Ururka Midowga Afrika ayaa dadaal ku bixiyey xiisada Soomaaliya iyo Kenya, isagoo dhowaan labada Madaxweyne kulan kula qaatay magaalada New York, kadib shirkii golaha guud ee Qaramada Midoobay.
Xiriirka labadaan dal ayaa sii xumaanayey, tan iyo markii uu soo shaac baxay khilaafka dhinaca Badda ee haatan dacwaddiisu taallo maxkamadda cadaalada dunida ee ICJ.
Previous articleUrurka Al-Shabaab ayaa markii ugu horeysay sheegay in ay si rasmi ah ula wareegeen deegaan ka tirsan Somaliland
Next articleMadaxweynaha Jubbaland Oo warbixinta Ka Dhageystey Wasaaradda Haweenka:- (Sawiro)